Nkọwa nke Honor 7, Nkwanye ugwu | Gam akporosis
Honor ejisie ike nweta ọnọdụ na ahịa ahụ maka uru dị ịtụnanya maka ego nke ngwaahịa ya. Ekwentị dị ka toro toro Na-asọpụrụ 4X ma ọ bụ Sọpụrụ 6 gbakwunyere egosila na ọdụ ụgbọ elu dị mma agaghị adị oke ọnụ. Na Na-asọpụrụ 7 ọ bụ ọzọkwa ihe atụ nke a.
Onye Asia na-emepụta ihe juru anyị anya n'oge ahụ ngosi nke ọkọlọtọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ site n'igosi ngwaọrụ kachasị elu na ọnụahịa dị egwu: euro 349 (zụta ya na nkwa zuru oke) na ịpị ebe a). Ugbu a, mgbe ịmechara ya Sọpụrụ 7 nyochaa Anyị nwere ike ikwenye na ọ bụrụ na ị na-achọ njedebe dị elu na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, Honor 7 bụ azịza kachasị mma.
1 Sọpụrụ 7, imewe ma wuchaa na elu nke njedebe-elu
2 A na ihuenyo dị ka gị okokụre
3 Kirin 935 na 3 GB, ihe karịrị iji kpalie egwuregwu ọ bụla nke ọma
4 Arụ ọrụ na Emui 3.1
5 Honor 7 jisiri ike mee ọtụtụ ohere nke onye na-agụ mkpịsị aka ya
6 Igwefoto nke na-enye nnukwu njide
6.1 Osisi nke ihe oyiyi ejiri Honor 7 mee
7 Sọpụrụ nnweta 7 na ọnụahịa
Sọpụrụ 7, imewe ma wuchaa na elu nke njedebe-elu
Na ileba anya mbu, myirịta doro anya n’etiti Honor 7 na Huawei Ascend Mate 7. Ngwaọrụ abụọ a na - ekerịta ụdịrị ha na ụdị mmecha ha. Ma nke ahụ bụ na Honor 7 nwere a unibody ahu ji metal na-esote a-egbu maramara aluminom, na-enye mma kwuchara.
Ihe owuwu nke ngwaọrụ a siri ike, ọ na-ahụ anya na ọkpụrụkpụ nke ekwentị ahụ, nke ruru 8.5 mm, ihe karịrị ụfọdụ ndị ọrụ, karịa ma ọ bụrụ na anyị echebara nke ahụ echiche. na ewetara 7 bụ 2 millimeters thicker karịa Huawei P8, ọ bụ ezie na ọ naghị enye m nsogbu maka onwe m maka ihe ọ bụla. Tụkwasị na nke ahụ, mmetụ ahụ dị ezigbo mma, na-agbasapụ mma site na pore ọ bụla.
Honor 7 dị oke, ọ bụrụ na anyị echebara nha ya: 143.2mm elu, 71.9mm ogologo na 8.5mm n'obosara. N'agbanyeghị nha ya, ọkọlọtọ nsọpụrụ Honor dị ezigbo ọkụ, gram 157, na-eme ka ọ dị mfe iburu n'agbanyeghị nha ya.
N'akụkụ aka nri nke ngwaọrụ anyị na-ahụ bọtịnụ njikwa olu na njedebe na, ihe a na-ahụkarị na ekwentị Huawei. Isi ihe a nwute ike na bọtịnụ ike iji mee ka ọ dị iche na bọtịnụ njikwa olu, nkọwa ọzọ na-egosi oke ọrụ nke ndị otu Honor design mere.
Otu n'ime isi ihe na-adọrọ mmasị na-abịa n'akụkụ aka ekpe ya. Ma nke ahụ bụ Honor 7 na-ejikọ bọtịnụ anụ ahụ nke ga-eme ka anyị nwee ike hazie iji nweta ngwa dị iche iche na ọrụ nke ngwaọrụ Huawei. Emewo m onwe m ahazi ya na, site na ijide bọtịnụ ahụ, a na-arụ ọrụ ọkụ ọkụ ma ọ bụrụ na m pịa ya ugboro abụọ ọ na-ejide. Ọsọ na kensinammuo.
Dị nnọọ n'elu bọtịnụ a dị na tray nke nwere ike ijide abụọ nano kaadị SIM, ma ọ bụ otu nano SIM na otu microSD. Otu echiche na m masịrị m na Huawei P8 Lite na onye nrụpụta ahụ jisiri ike na-erigbu nke ọma.
N'ikpeazụ, n'akụkụ akụrụngwa dị ọkà okwu nke ngwaọrụ ahụ, na mgbakwunye na igwe okwu na njikọ micro USB. Nkwubi okwu m banyere nhazi nke Honor 7 bụ nke ahụ emeputa rụrụ ihe impeccable ọrụ, na-enye ngwaahịa nwere oke egwu n'agbanyeghị ọnụ ahịa ya.
A na ihuenyo dị ka gị okokụre
Ihuenyo bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na smartphone na Honor 7 na-anapụta. Na a diagonal nke 5.2 sentimita, ihuenyo Honor 7 ruru mkpebi HD zuru ezu (1920 x 1080 pixels) na 424pp. Ogwe IPS ya na-enye nkọwa doro anya na nkọ.
Agba dị nkọ ma ikiri ikiri karịrị nke ziri ezi. Ihuenyo ahụ na-ele anya zuru oke ọbụlagodi ụbọchị anwụ na-acha n'ihi ya ọ nweghị ihe ị ga-akatọ na nke a.
Na mgbakwunye, Honor ejirila na-ebuli ihuenyo ahụ na nke kachasị, nke oọ na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 73% nke n'ihu ngwaọrụ ahụ, ekele ya ntakiri akụkụ okpokolo agba. Ọ bụ ezie na agwalarị m gị na agba ndị ọ na-enye site na ndabara dị mma, anyị nwere ike ịhazi okpomọkụ ha, ihe a na-ahụkarị na ekwentị nke onye nrụpụta Asia.
N'ikpeazụ mara na ihuenyo nke Honor 7 enwere ike ịrụ ọrụ ya ma kpọchie ya na mgbata okpukpu abụọ, dị ka ụdị LG's KnockOn. Onwe m enweghị mmasị na nhọrọ a ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ, m na-emeghe ihuenyo na akpa m na mberede, mana ọ dị mfe dịka ịghara ịrụ ọrụ a ma ọ bụrụ na ọ na-eme gị dịka m ma dozie nsogbu ahụ.
Kirin 935 na 3 GB, ihe karịrị iji kpalie egwuregwu ọ bụla nke ọma
Dị ka ọ dị na mbụ, onye nrụpụta na-alaghachi nzọ na nke ya iji mee ka asọpụrụ Honor 7. N'ụzọ dị otú a anyị na-ahụ ihe nhazi dị ike HiSilicon Kirin 935, SoC nwere isi asatọ mebere cores 53 GHz Cortex-A1.5 anọ na isi Cortex-A53 anọ ọzọ ruru elekere elekere 2.2 GHz. Ndokwa karịa mgbaze maka ekwentị dị elu.
Su Mali T-628MP4 GPU ọ ga - enyere gị aka ịmegharị egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla nke ọma. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ihe nhazi ihe eserese a dị ala karịa nke Samsung Galaxy S5 ji, anyị agbaala egwuregwu dị iche iche chọrọ ngwaọrụ dị ike iji rụọ ọrụ na Honor 7 emeela nke ọma, na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu ọ bụla na-enweghị mkpasu iwe. jerk ma ọ bụ lag.
Otu nkọwa nke masịrị m n'ezie bụ eziokwu ahụ, n'agbanyeghị agbanyeghị ike anyị nyere ngwaọrụ, Sọpụrụ 7 anaghị ekpo oke ọkụ, n'adịghị ka ndị ọzọ dị elu, dị ka Samsung Galaxy S6, nke na-ata ahụhụ site na nsogbu a mgbe ị na-elele ọdịnaya multimedia ma ọ bụ na-egwu egwuregwu vidio.
Enwere nhazi abụọ maka Honor 7: otu ụdị ya na 3 GB nke Ram na 16 GB nke nchekwa na ụdị ọzọ nwere 3 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa dị n'ime, ọ bụ ezie na na Spain naanị ụdị 16 GB dị. Mpaghara m nwalere, nke 16 GB, adaala ntakịrị, ọ bụ ezie na ekele maka oghere kaadi micro SD m edoziwo nsogbu ahụ site na itinye kaadị 64 GB.
The Huawei enyemaka na-agba mbọ ka a 3.100 mAh batrị iji kwado ịdị arọ nke akụrụngwa flagship ọhụrụ gị. Ugbua agbaala anyị gburugburu na Honor ngwaọrụ ndị nweere onwe ha, na Honor 7 agaghị adị obere.
Inye ya nkịtị ojiji ọnụnọwo m otu ụbọchị na ọkara, na-eru batrị 4%, nnwere onwe dị mma ma ọ bụrụ na anyị echebara uru ya echiche. N'iji ya karie ike, igwu egwu na ilele vidiyo, ọnụahịa ahụ diri ụbọchị zuru ezu. Ke adianade do, ya ngwa ngwa Nchaji usoro na-enye ohere ka anyị na-asọpụrụ 7 n'ụzọ zuru ezu ebubo na ihe karịrị otu awa.
Naanị ma achọtara m bụ ọkà okwu nke Honor 7. Theda olu dị nnọọ mma na ọnọdụ ya na-eme ka anyị mgbe ụfọdụ nkwụnye ihe ntanetị mgbe ị na-eburu ọnụ ya. Na mmechi, cheta na Honor 7 nwere nkwado 4G maka ndị otu Spanish ka nsogbu agaghị adị ma a bịa n'inwe njikọ njikọ LTE na mba anyị.
Arụ ọrụ na Emui 3.1
Mụ onwe m achọghị EMUI 3.1 custom layer. Enweghị m mmasị na oyi akwa omenala ọ bụla, mana nke a dị ka ọ na-eme ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ kwụsị. Ọ dabara na nsogbu a anaghị eme na Honor 7.
Ngwaọrụ na-arụ ọrụ nke ukwuu were were, na-enye ohere ịkwaga n'etiti ngwa na-enweghị nsogbu ọ bụla. Naanị ma ọ bụ nhọrọ ahụ nke na-amanye gị ịgafe windo dị iche iche ruo mgbe ịchọta ngwa ịchọrọ iji. Ọ dị ngwa ịchọta ngwa ahụ na desktọọpụ gị dị iche iche karịa imepe nhọrọ ọtụtụ.
Agbanyeghị na asọpụrụ 7 ugbu a na-agba gam akporo 5.0 Lollipop ọ na-atụ anya na Febụwarị biara mmelite nke sistemụ arụmọrụ Google kachasị ọhụrụ, gam akporo 6.0. Olileanya ha anaghị arịọ, n'ihi na mgbe Honor 7 nwere ike ịwụnye ngwa niile na micro SD
Honor 7 jisiri ike mee ọtụtụ ohere nke onye na-agụ mkpịsị aka ya
Nhazi ahụ dị mfe, naanị anyị ga-agbaso nkuzi ahụ iji hazie mkpịsị aka anyị iji bido iji ihe ntanetị akara Honor 7 nke na-amata onye ọrụ ngwa ngwa karịa Samsung Galaxy S6, ekele ya 360º biometric mmetụta.
Otu nkọwa m masịrị m nke ukwuu bụ na Honor 7 akara mkpisiaka na-agụ ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ ịmeghe ihuenyo; Ọzọkwa Anyị nwere ike ịnabata oku, see foto na vidiyo, gbanyụọ mkpu ma ọ bụ lelee ngosi ngosi site na iji mmegharị aka dị mfe na mkpịsị aka na onye na-agụ ya.Dịka ọmụmaatụ, anyị ga - ejide mkpịsị aka aka na onye na - agụ mkpịsị aka iji rụọ ọrụ igwefoto. Nhọrọ m chọtara bara ezigbo uru na nke ahụ na-abawanye ohere nke ihe mmetụta sensọ biometric a.
Usoro dị mfe ma kensinammuo. Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-ebu ya n'akpa gị ụfọdụ ọrụ na-arụ ọrụ na mberede mana ị nwere ike ịkwụsị ọrụ a mgbe niile ma jiri ihe mkpịsị aka mkpịsị aka mee ka ị kpọghee ọnụ.
Igwefoto nke na-enye nnukwu njide
Honor na-achọ ịkụ nzọ na ịnye anya m dị elu na Honor 7 bụ ihe atụ nke a. Igwefoto igwe nke ekwentị nwere oghere Sony IMX230, ihe mmetụta 20 megapixel na sọrọ Ikanam flash na-enye magburu onwe arụmọrụ.
Na mgbakwunye na igwefoto Honor 7, sapphire kristal mkpuchi Iji zere ọkọ, ọ na-etinye usoro nke na-ekewa ọkụ na-abata na onyonyo abụọ dị iche iche ma jiri ha tụnyere, na-enye ohere ilekwasị anya ngwa ngwa. Enwere nhọrọ dịgasị iche iche, na-enwe ike ịse foto panoramic, mee ka ndị a rụọ ọrụ Ọnọdụ HDR, ọnọdụ gbawara, tinye ọdịyo na onyonyo, vidiyo na-adịghị nwayọ ...
Anyị emeela ọtụtụ ule dị iche iche na eziokwu bụ na nsonaazụ nke captures dị mma, na-enye ihe oyiyi dị mma. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ha anọghị na elu nke elu ugwu a dịgasị iche iche, nsonaazụ nke njide ndị ahụ emere karịrị ezuru onye ọrụ ọ bụla.
Osisi nke ihe oyiyi ejiri Honor 7 mee
Anyị enweghị ike ichefu ya 8 megapixel n'ihu igwefoto, karịa ezuru oke selfies ma ọ bụ oku vidiyo. Ọ bụrụ na anyị tinye na nke a nke ya Ikanam flash n'ihu nke ga - enyere anyị aka ijide ihe na gburugburu ọkụ anyị nwere ike ikwenye na nnukwu ọrụ Honor mere na nke a.
Sọpụrụ nnweta 7 na ọnụahịa
Sọpụrụ 7 Ọ dịlarị ire ere na euro 349. Ọzọkwa ọ bụrụ na ị denyere aha na emeputa online ụlọ ahịa mGa-enweta mbelata ego na-atọ ụtọ nke ihe dị ka euro 50.
Nkwubi okwu m mgbe m nwalere Honor 7 maka izu abụọ bụ na ọ bụ ezigbo njedebe, na-agwụcha ihe na-enweghị ihe ọ bụla ga-emere ndị na-asọ ya anya na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri. More ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọnụ nwere akwụkwọ ikike afọ abụọ na mba anyị.
Ogo nke imecha dị ruo elu ọ bụla nke elu ugwu
Ihe mkpisiaka ihe mmetụta na-arụ ọrụ zuru oke
Bọtịnụ anụ ahụ nwere ike ịhazi nwere ike meziwanye ahụmịhe onye ọrụ
Ọdịdị ọdịyo abụghị nke kachasị mma na mgbe ụfọdụ ị nwere ike ikpuchi mbupute nke ndị ọkà okwu na mberede
16 GB nke nchekwa dị mma, ọ bụ ezie na ọ nwere ihu ọma, enwere ike ịgbasa ya site na oghere kaadị micro SD
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Sọpụrụ 7, anyị na-enyocha ekwentị kachasị mma - dị elu maka ihe na-erughị 400 euro
Ma isiokwu a dị ntakịrị. Enwere m Honor 7 kemgbe Septemba 2015 ...
Antonio | mobile ụlọ dijo
Dị nnọọ mma atụmatụ maka a ezi uche price, nnọọ Sony ịke maka interface. Ọ bụghị ọnụ ala, mana ọ bụ na ọ na-eburu ihe niile ị nwere ike ịrịọ na ekwentị mkpanaaka. Kwesịrị ịtụle, a na m eche etu o si aga n'ọhịa ntụkwasị obi?
Zaghachi Antonio | mobile ụlọ
Ugbu a na vmall, nke bụ weebụsaịtị webụsaịtị nke Europe, ọ dị na € 300. Ekwenyere m na draper. Oge a ka ọ dị n'ahịa maka ọkara afọ, mana eziokwu dị oke. naanị otu adịghị mma bụ na ọ naghị ebu nfc
Google Docs na-enweta ike itinye okwu na ụzọ dị mfe
LG mara ọkwa ọkwa ụwa nke K4 na K8